Toe-tanin'i Madagasikara - Wikipedia
Misy fizaràn'ny toe-tany dimy ao Madagasikara :
Ny toe-tany be orana any atsinanana (amorontsiraka atsinanana).
Ny toe-tany avo toerana, eo ampivoan'i Madagasikara 
Ny toe-tany maina somary mafana (Antsiranana)
Ny toe-tany maina (Toliara)
Tropikaly ny toetany amin' ny morontsiraka, ara-pehibe izy any atsinanana, tropikaly maina izy any amin' ny morontsiraka andrefana sy atsimo, ary tropikaly mangatsiaka izy any ampivoany. Ny Anticyclone ny Ranomasimbe Indianina no mampisy ny alizay atsimo atsinanana, mihisaka araky ny fizaran-taona io alizay io.
Ny toe-tany eo amin' ny faritra anivo dia mangatsiaka amin' ny andro ririnina ary matimaty na mafana rehefa andro fahavaratra amin' ny volana Desambra; ny rotsak' orana eo amin' ny faritra anivo dia antonontonony. Ny faritra andrefana dia manana toe-tany maina sady mafana mandavantaona.
((mg)) ((fr)) Madagasikara: ny toe-tany
↑ Faritan'i Antananarivo, Faritan'ny alaotra, faritan'ny Fianarantsoa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toe-tanin%27i_Madagasikara&oldid=998768"
Voaova farany tamin'ny 8 Desambra 2020 amin'ny 12:00 ity pejy ity.